Ireo tantara sangany tao amin’ny Global Voices niresahana fanimbàna tontolo iainana, nefa ny planeta teo ampiatrehana ny Andro Erantany ho an’ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2021 4:45 GMT
Ny vinavinan-tetikasa Kanal Istanbul mety hampisaraka roa ny tanibe eorôpeàna Istanbul amin'ny fanaovana lakandrano iray mirefy 45 km mampitohy ny Ranomasina Mainty amin'i Marmara ary mirazotra amin'ny helodranon'i Bosphorus. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny BBC News Türkçe.
Ny 5 Jona no fanamarihana ny Andro Erantany ho an'ny Tontolo Iainana, daty nosafidian'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1972 ho fanairana ny sain'izao tontolo izao momba ny maha-iankinan'ny aina ny tontolo iainana.
Nandritra ny taona marobe, tena nanao tatitra betsaka momba ny olan'ny tontolo iainana ny Global Voices, ary iray amin'ireo nifantohan'ny tantara tato aminay ny fomba fiantraikan'ny fandravàna tontolo iainana, ny rohivoahary efa marefo, fanapoizinana ny rojon-tsakafo ary ny fanimbàna ny olombelona sy ny biby noho ny asan'ny olombelona ihany. Hatreto, ireto ny vitsivitsy izay nahasarika indrindra ny saina tamin'ity taona ity:
Melohin'ireo vazimba teratany ny fitrandrahana ny ala amazôniàna ao Pero ataon'ilay orinasa shinoa (amin'ny fiteny anglisy)
Tsy maintsy hoe zavatra mifanohitra ve ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny resaka Harinkarena Faobe? Raha maro ireo governemanta no manao ny fampiroboroboana ara-toekarena ho laharampahamehana, isan'izany ny fampiasambola vahiny, adinon-dry zareo na odiany tsy fantatra ny zavamisy hoe ao anatin'ny fotoana maharitra, ireo orinasa no handoa be ny saran'ny hamenoana ny fanimbàna ny natiora vokatry ny nataon'ilay tetikasa tsy manaraka ny fenitra ara-tontolo iainana.
Ho an'ireo governemanta sasany dia fomba iray haingana hitakiana Harinkarena Faobe Maitso ny manondrana fotsiny ny fakon-dry zareo mankany amina firenena hafa sy mamela ireo firenena hiatrika ny vokadratsin'ny lasitra fanjifàna tsy lovainjafy napetrak'izy ireo.
Efa mampitandrina ireo manampahaizana manokana fa hiteraka fahasimbàn'ny tontolo iainana ny famoronana ilay lakandrano sahisahy Istanbul Kanal ao Tiorkia – ary hanokatra boatin'olitra (zava-tsy ampoizina) jeôpôlitika
Miaraka amin'ny efa ho ny 70 isanjaton'ny mponin'ny tany miaina amin'izao fotoana izao any amin'ireo tanàndehibe, mazàna ny fampiroboroboana ny tanàndehibe no tsy mahavita mampiditra lasitra maitso amin'ny fandrafetana izay handraisana mponina betsaka kokoa.
Manambara ny fotoana hanalefahana sy hanariana ny rano radioaktifa avy amin'ny orinasa Fukushima i Japana (amin'ny fiteny anglisy)
Nambaran'ny governemanta japoney ny fikasàny hamoaka ny rano voaloto avy ao amin'ny toby nokleary ao Fukushima ho alefa ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika amin'ny 2023, kanefa mbola mametraka olana goavana ho an'ireo vondrompiarahamonina manamorona ny morontsirak'i Fukushima io fanapahankevitra io.
Ireo sambo mpitatitra solika no tena loharanon'ny fandotoana ny ranomasina sy rano manerana izao tontolo izao. Rehefa tsy mihetsika ara-potoana ireo governemanta manoloana ireny loza mitatao ireny dia ireo mpikatroka mpiaro tontolo iainana no eny am-bava ady manaitra sy miantso mba hisian'ny tena fandraisana andraikitra.
Any Oman, vonona ny tsy hiraharaha ny olan'ireo mpikatroka mpiaro tontolo iainana ny governemanta ka hiroso amin'ny fampiroboroboana ny tanàndehibe na eo aza ny loza mitatao amin'ilay lohasaha maintso lonaka.
Tetikasa iray ho fampiroboroboana ny seranantsambo mety hiteraka loza ho an'ny rohivoahary ao Pero, izay ekena ho ny maro karazana indrindra eran'izao tontolo izao. Na dia nahavita nanemotra azy indray mandeha aza ireo fiarahamonina sivily, dia toa hita manaiky ilay tetikasa tsy dia nisy fanovàna goavana ihany ny governemanta, ary na teo aza ny fanombànana ara-tontolo iainana nataon'ireo tsy miankina nampiseho ny ho fiantraikany ratsy amin'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana.
‘Tsia’ hoy ny vondrompiarahamonina ao Trinidad amin'ilay tetikasa fitrandrahana mikendry ny hany sisa sahandriaka tsy voakitika ao amin'ny faritra (amin'ny fiteny anglisy)
Ao Trinidad & Tobago, vonona ny mponina ny hampitsahatra ilay tetikasa fitrandrahana ao amin'ilay hany sisa sahandriaka tsy mbola voakitika ao amin'ny firenena, ary izany dia fanintelony, raha ny governemanta kosa indray sy ireo orinasa dia toa tsy miraharaha ny adisisika ataon-dry zareo mba hialàna amin'ilay tetikasa.